धरान । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन तीन पटक धाएर चौथो दिन पनि विहान ८ बजेदेखि ३ बजेसम्म लाइन बसेर धरान–६ पानवारीका गोविन्द राईले भत्ता थापे । धरान–६ का दिपबहादुर कटुवाल भत्ता लिन बारम्बार धाउँदा समेत कहिले के कागजात नपुगेको कहिले भत्ता नै नआएको भन्दै बैंकले फर्काइदियो । यसरी बारम्बर फर्कनुपरेपछि उनी भत्ता नै नलिने निर्णयमा पुगे ।
सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई जीवन यापनमा सहज होस् भनि दिएको सुविधा लिन नै यतिका सास्ती भोग्नु परेपछि लाभग्राहीहरु समस्यामा छन् ।
नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु धेरै छन् । जस मध्ये संविधानमा उल्लेख भए अनुसार महिला, श्रमिक वृद्ध, अपांग असहाय, असक्त नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने, निजामती कर्मचारीलाई पेन्सन, लक्षित वर्गलाई सार्वजनिक यातायात र सार्वजनिक सेवामा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, बालबालिका पोषण भत्ता, लोपोन्मुख भत्ता, सुत्केरी भत्ता, खाद्यान्न सहयोग कार्यक्रम जस्तै (स्कुलमा दिवा खाना), अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम छन् । जसमध्ये हामी सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा चर्चा गर्छौ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सरकारले लक्षित वर्गका जनतालाई सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले वितरण गर्न थालेको हो । जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलितवर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजाति, अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरू एवं बालबालिकाहरूको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण गर्न, राज्यको दायित्व, संविधानको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूले निर्देश गरे अनुरूप सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सुरु गरेको हो । २०५१ सालको मनमोहन अधिकारीको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ११ पुस २०५१ मा संसदमा पहिलोपटक बजेट पेस गरे । बजेटमा वृद्धभत्तालाई केही स्थानमा नमुनाका रूपमा लागू गरियो । यसपछि २०५२ असारमा उनले अर्काे बजेट भाषण गरे । यस बजेटले देशैभरका ७५ वर्ष उमेर काटेका नागरिकलाई मासिक एक सय रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यहीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरुवात भएको नेपालमा अहिले वृद्धाभत्ता मात्र नभइ यसको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । हाल नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा लगानी भएको रकम सम्पूर्ण पुँजीगत खर्चको करिब १७ प्रतिशत रहेको छ । अहिले नेपालमा करिब १० लाख ज्येष्ठ नागरिकले यस्तो भत्ता लिइरहेका छन् ।
नगर तथा गाविसका वडा सचिवले वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले आएर बैंक मार्फत् वितरण गर्न थालिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरु सबै शारिरीक रुपमा अशक्त छन् । अपवादमा एकल महिला र अरुको भत्ता बुझिदिने बाहेक । सरकारले पनि नागरिकको सुरक्षाको लागी सम्मानको लागी भनेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको हो । तर वितरण प्रणाली एकदमै अफ्टेरो र गाह्रो भएकोले गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता थाप्न सुविधा भन्दा सास्ती बढी छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने प्रणालिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन भन्दै बैकबाट वितरण सुरु गरेपछि भत्ता लिन सेवाग्राहीलाई अहिले सकस परिरहेको छ । भत्ता लिनकै लागी हप्तादिनसम्म धाइरहनुपर्ने, बिहान उज्यालो हुँदादेखि बेलुकीसम्म लाइन लाग्नुपर्ने र त्यति गर्दा पनि विभिन्न कागजात मिलाउने र बैंकका प्रकृया पुरा गर्ने झण्झटले भत्ता लिन एकदमै समस्या छ । त्यति मात्र कहाँ हो र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन जाने लाभग्राहीहरुलाई बैंकमा बस्ने (पालो कुरेर बस्ने) स्थान छैन । बैंकहरु वृद्धवृद्धा मैत्री र अपांग मैत्री छैनन् । सबै बैंकहरु दोस्रो तल्लामा छन् ।
धरान–६ पानवारीका दीपबहादुर कटुवाल जेष्ठ नागरिक भत्ता लिन भन्दै करिब ७ किलो मिटरको दुरीमा रहेको धरान बजारमा रहेको मेघा बैंक लिमिटेडमा भत्ता लिन आइपुगे । कागजात नमिलेको भन्दै बैंकले फर्काइदियो । विहान ८ बजेदेखि लाइन बसेर दिउँसो २ बजे पालो आएको थियो त्यतीबेला फर्काइदिएपछि उनी धरान उपमहानगरपालिका पुगे । त्यहाबाट पनि कागजात नमिलेपछि उनी वडा कार्यालय फर्किए । वडा कार्यालयमा कागजात मिलाएर पुनः भत्ता लिन पुगे तर पनि भत्ता पाएनन् । उनी यसरी धेरै झण्झट भएपछि अबदेखि भत्ता लिन नै नजाने निर्णयमा पुगे । तर पछि वडाध्यक्ष भुवनसिं बस्नेतले उनलाई भेटेर नै कागजात मिलाइदिए पछि मात्रै भत्ता बुझ्न पाए । उनी कागजी झण्झटबाट दिक्क भएपछि भत्ता नलिने अवस्थामा नै पुगेका थिए ।
उनी जस्तै अरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । धरान–६ का सबै लाभग्राहीले भत्ता बुझ्न सार्वजनिक यातायातबाट करिब २५ मिनेटको यात्रा गरेर पुग्नुपर्ने हुन्छ । भत्ता बुझ्न आउँदा विहान ८ बजे नै घरबाट हिड्ने गरेका छन् । ८ बजे घरबाट हिडेका वृद्धवृद्धाहरु बेलुका ४ बजे मात्रै भत्ता बुझेर निस्कन्छन् । भत्ता बुझ्ने दिन दिनभरी लाइन बस्दा भात न पानी हुनुपरेको गुनासो जेष्ठ नागरिकले गर्छन् । भत्ता लिन बसमा आउँदा २५ रुपैया र टेम्पोमा आउँदा ५० रुपैया एकोहोरो भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । शरिर बुढो भएपछि बाहिरको खाना पनि रुच्दैन धरान–६ की मनमाया कार्कीले बताइन् । एकै दिन मात्र आएर भत्ता लिन पाइदैन । २–३ दिन धाउनुपर्छ उनले भनिन् । कारण एक दिनमा बैंकले १ सय ५० भन्दा बढीलाई सेवा दिन सक्दैन । मेघा बैंकले मात्रै ३४ सय ८४ लाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाड्नुपर्ने हुन्छ । एक महिनामा पनि भत्ता बाडेर सक्दैनन् बैंकहरुले ।
धरानमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७५÷७६ को तेस्रो चौमासिक किस्ता वितरण विवरण अनुसार ५ हजार ७ सय ८४ जना जेष्ठ नागरिक, २ हजार ५ सय ८९ एकल महिला, विधवा ३ हजार ३५, लोपोन्मुख आदिबासी १, पूर्ण अपांगता १ सय ७७, अति अशक्त अपांगता ४ सय १०, दलित बालबालिका ८ सय ६४ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।
यतिका संख्यालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न जम्मा ५ वटा बैंकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । धरानमा ३० भन्दा बढी बैंक सञ्चालनमा छन् । तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नका लागी जम्मा ५ वटा बैंकलाई मात्रै जिम्मेवारी दिइएको छ । पछिल्लो समय धरान उपमहानगपालिकाले बाडेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण हेर्ने हो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २९३४ जनालाई, सानिमा बैकले २१०० जनालाई, मेघा बैंकले ३४८४ जनालाई, लक्ष्मी बैंकले २४२२ जनालाई र सिद्धार्थ बैंकले १९२० जनालाई भत्ता वितरण गर्छ । एउटा बैंकले एउटा काउण्टरबाट एकदिनमा १ सय भन्दा बढीलाई सेवा दिन सक्दैन यो उनीहरुको सेवा गर्ने क्षमता हो । गरिमा विकास बैंकका मेनेजर अनोज लाखे भन्छन् ‘एउटा काउण्टरबाट एक दिनमा स्ट्याण्डर्ड सेवा दिने हो भने हामी एक सय जनालाई दिन सक्छौ, यो बैंकको स्ट्याण्डर्ड नै हो । तर कहिलेकाही हामी १ सय ५० जनालाई पनि सेवा दिन सक्छौ ।’ उनी भन्छन् ‘बैंकको काउण्टर हो धेरैलाई सेवा दिन अफ्टेरो पर्छ, नगद कारोबार गर्दा दबाब भयो भने गल्ति हुनसक्छ त्यसैले कुनै पनि बैंकको काउण्टरले दिने सेवा भनेको १ सय ५० नै हो ।’
दिपबहादुर कटुवाल ।
बैंकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाड्नका लागी थप काउण्टर सञ्चालन गरेको पनि पाइदैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन बिधि–२०७५ अनुसार बैंक मार्फत् मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्छ भनिएको छ । ‘स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका लाभग्राहीहरुलाई सुविधा पुग्ने गरी भत्ता वितरणका लागी उपयुक्त बैंक÷वित्तिय संस्थाको छनौट गर्नेछ’ –भनिएको छ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन बिधि–२०७५ मा । बैंकले लाभग्राहीलाई सेवा दिदा आफ्नो शाखाबाट वितरण गर्नुपर्ने र शाखा नभए उपयुक्त स्थानमा एटिएम विन्दु राखेर वा बैंक प्रतिनिधी (शाखा रहित बैंक) नियुक्त गरी निज मार्फत् समेत वितरण गर्न कार्यविधिले भनेको छ । त्यति मात्र नभइ कार्यविधिले स्वीकृत प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक मार्फत वा घुम्ति शिविर खडा गरेर समेत रकम भुक्तानी गर्न भनेको छ ।
तर बैंकहरुले यस्तो सुविधा दिएको पाइदैन । भत्ता लिन आएका लाभग्राहीलाई पर्खिएर बस्ने स्थान समेत बनाइदिएको छैन । लाभग्राहीहरु प्राय सबै भ¥याङमा बसेर लाइन लाग्ने गरेका छन् । धरान–२० विष्णुपादुकाबाट भत्ता थाप्न सिद्धार्थ बैंक आइपुगेकी माया राईले भनिन् सधै हामी त यही भ¥याङमा लाइन लाग्छौं । बैंकहरु वृद्धवृद्धा मैत्री छैनन् । धरानमा भत्ता वितरण गर्ने बैंकहरु राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाहेक अरु सबै बैंक दोस्रो तल्लामा छन् । पालो कुरेर बस्ने व्यवस्था छैन । अझ अपांग लाभग्राही त बैंकको काउण्टरमा पुग्न सक्दैनन् उनीहरु आफ्नो भत्ता थाप्न अरुकै साहारा लिनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन बिधि–२०७५ ले अनुगमन तथा सुरपरिवेक्षण समिति बनाएर नियमित अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्छ भनेको छ । जसमा स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति बनाउनुपर्छ भनिएको छ । तर धरान उपमहानगरपालिकामा सो समिति नै गठन भएको छैन । समितिले लाभग्राहीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी गुनासो तथा सुझाव संकलन गरे आवश्यक काम कारवाही गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । तर समिति नै गठन नभएकोले गर्दा गुनासो सुझाव कसलाई दिउन् ति लाभग्राहीले ? धरान उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा हाल कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारीले भने समिति गठनको विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरिन् । उनले लाभग्राहीमा भ्रम भएको कारण समस्या भएको बताइन् । उनले भत्ता बाड्न थालेकै दिन नलगे फिर्ता जान्छ भन्ने भ्रम भएको र एकैपटक भिड लाग्ने गरेको बताउँदै यसलाई चिर्न जनचेतना आवश्यक रहेको बताइन । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समस्या भएको र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा उपमहानगरपालिकामा छलफल भइ सम्बन्धीत कर्मचारीलाई सहजताका लागी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताइन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्पर्क व्यक्ति राजकुमार डंगोल भन्छन् ‘हामीले धरानका सबै लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत् भत्ता वितरण गर्दा रत्न रोडदेखि माछा भौडिसम्म लाभग्राहीको लाइन हुन्थ्यो ।’ अहिले ५ वटा बैंकलाई दिदा त्यस्तो विकराल अवस्था छैन । अब फेरी १० वटा बैंकलाई भत्ता बाड्ने जिम्मेवारी दिने हो भने लाभग्राहीले समस्या झेल्नु नपर्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार भत्ता लिने समस्या बैंकमा लाइन लाग्नुपर्ने मात्र नभइ कागजात नमिल्ने, नविकरण नगर्ने जस्ता समस्या पनि छन् । यसलाई सहज गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा सुरुका एक हप्तासम्म सम्बन्धित वडा कार्यालयले एक जना सहजकर्तालाई खटाइदिए जेष्ठ नागरिकहरुले बेहोर्ने कागजी प्रकृयाको झण्झट मुक्त हुने उनी बताउँछन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धरानकी सहायक प्रबन्धक सुजाता शर्माका अनुसार भत्ता वितरण गर्दा एक हप्तासम्म भिडभाड हुने गरेको बताइन् । तर उनले बैंकमा समस्या नहुने दाबी गरिन् । ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धा लाइनमा ४÷५ घण्टासम्म बसेको देखेकी उनले त्यसलाई समस्याको रुपमा देखिनन् । उनी भन्छिन् ‘एक हप्तासम्म बैंकमा अलि भिडभाड हुन्छ तर समस्या नै चाही हुँदैन र लाभग्राहीलाई असुविधा नै चाही हुँदैन । अझ बैंकमा भत्ता लिन वृद्धवृद्धाहरु कागजी प्रकृया नमिलेको भन्दै फर्कनेको संख्या दैनिक ४÷५ जना हुने गरेको शर्माले बताइन् । एउटा बैंकबाट दैनिक ४÷५ जना वृद्ध आमाबुवा कागजी प्रकृया नमिलेर फर्कदा ५ वटा बैंकबाट कम्तिमा २० जनाले दुःख पाइरहेको उनले बुझिनन् । धरान वडा नं. ६ का अध्यक्ष भुवनसिं बस्नेतले समेत सामाजिक सुरक्षा वितरणमा समस्या नभएको बताए । उनले बैंकमा महिनौ दिनसम्म ७० वर्ष कटेका वृद्ध आमाबुवाको लाइन देख्दा समेत समस्या नभएको बताए ।
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकका सिइओ तुलसी प्रसाद वस्तीले भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा ठूलो समस्या रहेको बताए । उनले भने भत्ता लिनेहरुमा भत्ता आएकै दिन लिएन भने फर्किएर जान्छ भन्ने भ्रम रहेको र त्यो भ्रम नहटाएसम्म समस्या समाधान नहुने बताए । उनले भने ‘हामी पनि हाम्रा ४–५ वटा शाखाबाट भत्ता वितरण गर्छौं, जब भत्ता वितरणको समय आउँछ तब बैंकमा लाइन लाग्नेको भीड लाग्छ । भिड पनि थामिनसक्नु हुन्छ । उनी भन्छन् राज्यले जेष्ठ नागरिक लगायतलाई सम्मान स्वरुप दिएको भत्ता वितरणमा एकदमै सहज हुनुपर्ने हो तर भएको छैन । वृद्ध बा आमा लाइन लाग्दा भ¥याङबाटै खस्नुहोला भन्ने डर लाग्छ मलाई ।’ धरान उपमहानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विनोद कुमार पोखरेल यो समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नै नसक्ने बताउँछन् । उनले भने –‘यो समस्या धरानमा मात्र होइन देश भरी छ, अब धरानले मात्र चाहेर समस्या समाधान हुँदैन । विस्तारै यो समस्या समाधान हुँदै जान्छ ।’
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न विशेष गरी वृद्धवृद्धालाई एकदमै सकस छ । एक त ७० वर्ष कटेका वृद्धवृद्धालाई घर बाहिर बस्नै असहज हुन्छ । बेला बेलामा दिशा पिसाब लागिरहन्छ । बाहिरको खाना शरिरले पचाउँदैन । भत्ता थाप्नका लागी लाइन लाग्ने सामथ्र्य हुँदैन । बस्नका लागी कुनै पनि बैंकले प्रबन्ध गरेको छैन । बैंक गएकै दिन भत्ता थाप्नेको संख्या कम छ । धाइरहनुपर्ने बाध्यता छ । एक दिनमा धेरैलाई दिदा बैकले एक सय जनालाई भत्ता दिन्छ । एउटा बैंकमा सरदरमा २५ सय भन्दा माथी छ भत्ता बाड्ने लाभग्राहीको संख्या । भत्ता वितरण गर्न बैंकलाई एक महिना लाग्छ । ५ वटा बैंकले धरानमा १२ हजार ८ सय ६० जनालाई भत्ता वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
समस्या समाधान गर्ने निकाय धरान उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति समेत बनाएको छैन । विभिन्न पत्र पत्रिका, रेडियो टेलिभिजनमा यो समस्याका बारेमा समाचार आइरहदा समेत सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान नदिदा समस्या समाधानमा गम्भिर छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । धरान उपमहानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विनोद कुमार पोखरेलले देशकै समस्या हो भन्दै पन्छिन्छन् । धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी जनचेतनाको कमिले बंैकमा भिड भएको भन्दै उनी पनि यसबाट पन्छिएकी छन् । उनले जनचेतना जगाउनुपर्ने भने पनि जगाउनका लागी काम गर्ने बताइनन् । यता बैंकका कर्मचारी भत्ता वितरणमा समस्या नै देख्दैनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धरानकी सहायक प्रबन्धक सुजाता शर्मा वृद्धवृद्धा आमाबुवाको लाइनलाई उनी समस्या मान्न तयार नै छैनन् । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकका सिइओ तुलसीप्रसाद वस्तीले भने झै जनचेतना जगाउने र भत्ता वितरण गर्ने बैंकको संख्यालाई वृद्धि गर्ने हो भने वितरण व्यवस्थामा सुधार आउने र लाभग्राहीले दुःख नपाउने देखिन्छ ।